आयो नयाँ प्रावधान ! अवदेखि कम्पनी दर्ता गर्न र खारेज गर्न दुवै सहज !
ARCHIVE, OFF THE BEAT » आयो नयाँ प्रावधान ! अवदेखि कम्पनी दर्ता गर्न र खारेज गर्न दुवै सहज !
काठमाडौँ - कम्पनी ऐनको नयाँ प्रावधान आएसँगै अवदेखि कम्पनी दर्ता गर्न र खारेज गर्न दुवै सहज हुने भएको छ । ऐनले नै अवदेखी ७ दिनभित्रै कम्पनी दर्ता प्रक्रिया सकिने बताएको छ । पहिले यो म्याद १५ दिनको थियो । अझ राम्रो कुरा त के छ भने अब कम्पनी दर्ता गर्दा विद्युतीय हस्ताक्षरलाईपनि ऐनले मान्यता दिएको छ । यसले अव कम्पनी दर्ताको सम्पूर्ण काम अनलाइनबाट नै हुनसक्ने बाटो खुला गराएको छ ।
यता कम्पनी खारेजपनि सहज भएको छ । दर्ता भएको २ वर्षसम्म कारोबार सुरु नगरेका कम्पनीलाई चुक्तापुँजीको ०.५ प्रतिशत शुल्क तिरेर दर्ता खारेज गर्न सकिने प्रावधान ऐनले पारित गरेको छ । कम्पनी ऐनको नयाँ प्रावधान अनुसार अब प्राइभेट कम्पनीमा ११ जना भन्दा बढीको सञ्चालक समिति बनाउन नपाइने ब्यवस्था पनि ऐनमा छ । कम्पनी रजिष्ट्रर कार्यालयको शाखा कार्यालय पनि खोल्न सकिने ब्यवस्थाले अब मोफसलमा पनि कम्पनी दर्ता सुविधा प्राप्त हुनेछ ।